प्रदुषण हटाउन स्विजरल्याण्डले बनायो कार्बनडाइअक्साइड सोस्ने मेशिन, काठमाडौंलाई काम लाग्ला? :: BIZMANDU
प्रदुषण हटाउन स्विजरल्याण्डले बनायो कार्बनडाइअक्साइड सोस्ने मेशिन, काठमाडौंलाई काम लाग्ला?
प्रकाशित मिति: Jan 4, 2018 12:42 PM
काठमाडौंबासी धुलोधुँवाले आक्रान्त भएको लामो समय भैसकेको छ। सडक बिस्तार, मेलम्चीको खानेपानी पाइप बिस्तारकालागि खनिएको सडकका साथै सवारी साधनको बढ्दो चापले पनि राजधानीलार्इ प्रदुषित शहर बनाएको छ।
हालै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पनि प्रदूषण खतराको स्तरमा पुग्यो। दिल्लीले त प्रदुषणबाट बाहिर निस्कन पहल समेत थालिसकेको छ। वायूमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको घनत्वले रेकर्ड तोडिसकेको छ जसकारण पूरै विश्वमा प्रदुषणबारे चिन्ता ब्यक्त भैरहेका छन्।
विश्वभर नै वातावरणकालागि प्रदूषण निकै जोखिमको रुपमा रहेपछि बिभिन्न प्रविधिहरुको निर्माण गरी यसलार्इ सुधार्नकालागि बिभिन्न प्रयासहरु भैरहेका छन्। स्विजरल्याण्डको एक कम्पनीले यस्तो प्रविधिको विकास गरेको छ जसबाट कार्बनडाइअक्साइडलार्इ वायूमण्डलबाट सिधै सोस्न सकिन्छ।
ज्यूरिकको बाहिरी इलाकामा हिनविल रिसाइक्लिङ केन्द्रको बाहिर १८ वटा ठूला पंखा भएको मेशिन राखिएको छ। हरेक पंखा एउटा वासिङ मेशिनको आकारको छ। यो पंखाले वरपरको हावालार्इ आफूतिर तान्ने काम गर्छ। मेशिन भित्र भएको रसायनको लेप भएको फिल्टर कार्बनडाइअक्साइडलार्इ सोस्ने गर्छ। जब यो फिल्टर १०० डिग्री सेल्सियसम्म तातो हुन्छ यसले शुद्ध कार्बनडाइअक्साइड बटुल्ने गर्छ।
यस प्रविधिलार्इ ‘डाइरेक्ट एयर क्याप्चर सिस्टम’ नाम दिइएको छ। यसलार्इ स्विस कम्पनी क्लाइमवर्क्सले तयार पारेको हो।
यो मेशिनले एक वर्षमा वायूमण्डलबाट ९०० टन कार्बनडाइअक्साइड बटुल्न सक्छ । कम्पनीले यो कार्बनडाइअक्साइडलार्इ ६०० डलर प्रतिटन मूल्यमा तरकारी उत्पादक किसानहरुलार्इ बेच्ने गर्छ।
वास्तवमा शुद्द कार्बनडाइअक्साइडलार्इ माछादेखि लिएर कंक्रिट बनाउने, कार सिट, टुथपेष्ट तथा तेल उत्खनन तथा इ-डिजेल बनाउने काम सम्ममा प्रयोग गरिन्छ। अमेरिकामा त झन् कार्बनडाइअक्साइडको कारोबार तीब्र गतिमा विस्तार भैरहेको छ।
क्लाइमवर्क्सका सह संस्थापक इयान वर्जबेकर भन्छन्-‘पहिलोपटक हामी ब्यावसायिक रुपमा कार्बनडाइअक्साइड बेचिरहेका छौं। यो प्रविधि महंगो छ र हामी लागतलार्इ १०० डलर प्रति टनसम्ममा झार्ने कोशिश गरिरहेका छौं। यो प्रविधिलार्इ ब्यापक बनाएर यसको लागत कम गर्न सकिन्छ।’
कम्पनी २०१५ सम्म कार्बनडाइअक्साइडलार्इ वैश्विक उत्सर्जनको एक प्रतिशत वायूमण्डलदेखि बाहिर निकाल्न चाहन्छ। तर यो कोशिशकालागि यस्ता साढे सात लाख मेशिन आवश्यक हुन्छ। यसलार्इ संचालन गर्नकालागि पनि धेरै नै मात्रामा उर्जाको आवश्यकता पर्छ।
‘डाइरेक्ट एयर क्याप्चर सिस्टम’का लागि क्यानडामा कार्बन इन्जिनियरिङ कम्पनी तथा फिनिश जर्मन कन्सोर्शियमले पनि कोशिश गरिरहेका छन्।
बिशेषज्ञहरुले यस प्रविधिको ब्यबहारिकतामा प्रश्न उठाइरहेपनि अब विश्वमा यस्तो प्रविधि अत्यावश्यक भएको छ। वायूमण्डलबाट कार्बनडाइअक्साइडको मात्रालार्इ सीमाभित्र राख्ने कोशिश असफल भैसकेको बेला यस्तो प्रविधिले मद्दत पुग्ने छ।
इजान बर्जवेकर भन्छन्- ‘२० वर्ष पहिले कार्बन उत्सर्जन कम गर्नकालागि दबाब दिनुले अर्थ राख्थ्यो तर आगामी सन् २०५० सम्ममा बायूमण्डलबाट १० गीगा टन कार्बन डाइअक्साइड प्रत्येक बर्ष निकाल्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनेछ।’
वायूमण्डलमा आजभन्दा आठ लाख वर्ष पहिलेको तुलनामा कार्बनडाइअक्साइडको घनत्व धेरै भैसकेको छ। वायूमण्डलमा यो ग्यासको मात्रा ०.०४ प्रतिशत छ।
प्रदुषण हटाउन स्विजरल्याण्डले बनायो कार्बनडाइअक्साइड सोस्ने मेशिन, काठमाडौंलाई काम लाग्ला? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।